Dagaalka Muqdisho ka soo socda ayaa u muuqda mid mar labaad iska hor keenaya kooxihii Mujaahidiinta iyo qolooyinkii Suluxa kuwaas oo kala degen Waqooyiga iyo Koofurta Muqdisho.
Buluugleey, April 19, 2006
Hadda ka hor markii xoogaga USCda ay rideen dowladii Siyad Barre ayey waxey u kala jabeen laba koox oo xaga fikirka ku kala duwan sidaas awgeedna ku dagaalamay. Dagaalka ka dib ayey aragti kala duwanaantii waxey isku rogtey laba beelood oo awooda ku dagaalamaya, sidaasna waxey Muqdisho ugu kala go’day laba qeybood oo ilaa iyo hadda magaalada Xamar u qeybisay Waqooyi iyo Koofur.
Kooxda kowaad waxey ahayeen jabhadihii ka soo dagaalamay gobolada, kuwaas oo dhiig fara badan u soo daadiyey tuurista keligitaliyihii milateriga marxuum Siyad Barre. Kooxdaan oo ah halyeeyo naftooda hurayaal ah ayaa waxey aaminsanayeen in dalka ay xukunkiisa qabtaan dhamaan jabhadihii xubeysnaa inta laga sameynayo doorasho guud. Dadka Muqdisho ayaa kooxdaan u yaqaaney mujaahidiin u soo halgamey tuurista xukunkii kelitalisnimada ku dhisnaa.
Kooxda labaad waxey ahaayeen ganacsato, madaxdii dowladihii rayidka ee musuqmaasuqa, iyo kooxo rayid iyo ciidan isugu jira oo ka soo horjeedey dowladii Siyad Barre. Kooxdan ayaa maskax iyo hanti fara badan u huray sidii loo ridi lahaa maamulkii kelitaliska ahaa, waxeyna kooxdan aaminsanayeen in la sameeyo dowlad rayida oo ku dhisan adeegsiga ama meel marinta danaha gaarkaa.
Hadda ayaad u moodaa in fikirkaas uu dib u soo laba kacleynayo, waxaana magaalada Xamar hadda isugu hub aruursanaya kooxihii kala taageersanaa labadaas fikradood, kuwaas oo ku biyo shubanaya beelaha kala degen Waqooyiga iyo Koofurta Muqdisho. Inta badan maleeshiyooyinkii mujaahidiinta ayaa u rogmadey dhinaca diinta, meesha kooxda Suluxa ay u rogmadeen calooshooda u shaqeystayaal u adeega dano shisheeye oo ku xoolo raadsanaya la dagaalanka diinta Islaamka.
Qabqablayaasha qaar ayaa dhiirogeliya bilowga dagaalka oo ka qeyb qaata, kadibna isaga baxa marka ay arrintu isku rogto dagaal beeleed ama ay beeshooda uga timaado cadaadis muujinaya inuu isaga dhexbaxo laba beelood dagaal ka dhexeeya. Dadka qaar ayaa ku tilmaama dagaaloogayaasha ku dhex jira beelaha isdagaalamaya kuwo huriya dagaalada loo soo agaasimey in laga dhex dhaliyo beelaha fikirka ku soo dagaalamay.
Wadaadada degen koofurta Muqdisho ayaa iskood isugu xilsaaray iney naftooda u huraan sidii ay shacabka Muqdisho ugu sameyn lahayeen nidaam garsoora oo ku dhisan diinta Islaamka. Kooxdaan waxey u muuqdaan iney yihiin mujaahidiin naftooda u huraya in dadka loo keeno nidaam kala xukuma, waxeyna daneynayaan mushaar la’aan in ay dadka ka difaacaan dhibaatada ka dhalatay dowlad la’aanta. Ilaa iyo hadda uma muuqdaan kuwo xukun ama xoolo doona, laakiin waxey ku adag yihiin mustaqbalka iney hirgeliyaan xukunka Islaamka oo aysan ilaa iyo hadda ummadda Soomaaliyeed aysan qaab dowladnumo afti ku qaadan ku dhaqankeeda.
Kooxda labaad oo ka kooban qabqablayaasha dagaalka Muqdisho ayaa ah koox ka soo hartay qoloyinkii dhinaca fekerka marba qolo raacayey, laakiin u liicsanaa dhinaca kooxda Sulux oo Soomaalidu u taqaano kuwa ku daneysta nabada iyo ukala ergeynta. Kooxdan ayaa u muuqda kuwo dantoodu ay tahay iney helaan awood iyo xoolo, waxeyna jid kasta u marayaan sidii ay ku gaari lahayeen danahoodaas ayna ula dan wadaagi lahayeen shisheeye iyo sokeeyaba. Waxa keliya ee kooxdan ay sharaf uga helaan shacabka Muqdisho iyaga oo meel cad iska mariyey cadowtinimada Itoobiya iyo qabyaalad ku xukunka dowlad Col. C\_llahi Yusuf.
Waxaa loo soo jeediyey wadaadada ineysan ku deg degin dagaalka ay la gelayaan kooxda qabqablayaasha oo awoodoodii ay noqotay gabal sii dhacaya. Sidoo kale waxaa lagula talinayaa wadaadada ineysan diinta u adeegsan iney ku gaaraan nidaam dowladeed, taas oo u baahan doorasho ay ummada Soomaaliyeed ku qaadato nidaamkaas dowladeed, taas oo hadda loo arkay midaan muuqan, dadkuna uusan diyaar u ahayn dowlad la'aanta awgeed.
Waxaa dhanka kale qabqablayaasha loo soo jeediyey iney joojiyaan dagaalka ay kula jiraan diinta, aysana ku qaldamin dagaalka diinta oo aysan horay u aqoon. Waxey dadka intiisa badan qabaan iney dhamaatay qabqabtii iyo dagaalkii la isku muujin jirey. Awoodooda dhacday waxey astaan u tahay kala guur soo dhameyneysa nidaamka fowdada, kaas oo fursad u ahaan jirey sii jiritaanka nidaamka qabqablanimada.
Waxaa la saadaalinayaa inuu dagaal Muqdisho ku dhexmarayo labadaas kooxood haddii aysan labaduba ka tanaasulin danaha ay kala wataan oo iska hor keenaya kooxahooda, kuwaas oo labada kooxoodba ay iskood isugu xil qaadeen fulintooda. Waxaa maslaxadu ku jirtaa in la joojiyo adeegsiga diinta loo isticmaalayo qaab maamul iyo la dagaalanka diinta lala kaashanayo dalal shisheeye.